तल्लो चिबुक को Periostitis: कारणहरू, निदान, लक्षण र उपचार
को periosteum मा सुनिंनु विद्रधि को एक चिकित्सा निदान छ तल्लो चिबुक को। आईसीडी कोड 10 अप्रासंगिक K10.22 र K10.23। पहिलो मामला मा सुनिंनु दोस्रो नम्बरको प्रारम्भिक फारम रोग को पुरानो फारम संकेत छ।
तल्लो चिबुक को आईसीडी 10 periostitis दुई उपसमूहहरु विभाजित छ, तर भडकाऊ प्रक्रिया व्यावहारिक रूप धेरै राम्रो अवस्था छ। त्यसैले, ट्यूमर को स्रोत, विकास चरण, जटिलताहरुलाई प्रकार अनुसार subclasses आवंटित।
पृष्ठभूमि विद्रधि विकास
को मौखिक गुहा सधैं हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु को प्रभाव महसुस गरिएको छ। तिनीहरूले निम्न कारणहरूले गर्दा त्यहाँ:
अयोग्य वा खराब प्रक्रिया खाना;
हातमा मार्फत, अधिक अक्सर बच्चाहरु मा हुन्छ;
यसलाई हटाउँदा पछि सुनिंनु वा दाँत समयमा आन्तरिक Pathway।
अक्सर सुनिंनु गालामा क्षेत्र, वा अन्य cranial ऊतक जान्छ। हामी तल्लो चिबुक एक विशिष्ट विद्रधि, फोटो ठूलो lesion संकेत प्रतिनिधित्व गर्छ। नाम स्वस्थ कक्षहरू संक्रमण रोग proliferation को संयन्त्र वर्णन - प्रवाह एक लिक संकेत गर्छ।
Periostitis mandible शीर्ष भन्दा कम खतरनाक हुन्छ। तर, चिकित्सा उपचार बेवास्ता छैन जब प्राथमिक लक्षण विकास। प्रवाह गर्ने मसूडों को आन्तरिक Tissues मा तेजी फैलाउन र कारण सक्षम छ गाल edema। यसबाहेक, ट्यूमर गठन periosteum प्रक्रिया asymptomatic तरिका विस्तार हुन सक्छ।
सामान्य दाँत क्षय दयनीय जटिलताहरू गर्न जान्छ। शरीर भर मध्यम को जीवाणु प्रवाह, श्वसन पर्चा, फेफडों, को bronchi को सुनिंनु पैदा। रोग को भारी उन्नत अवस्थामा शरीर मा रोग परिवर्तन गर्न नेतृत्व। त्यसैले तामचीनी मा inconspicuous स्थान सर्जन को समस्या छ।
को प्रवाह को प्रारम्भिक चरणमा दन्त चिकित्सक गर्न आवधिक भ्रमणमा द्वारा रोकियो गर्न सकिन्छ, तर धेरै मान्छे periodontitis को रोकथाम बेवास्ता।
घटना को मुख्य तरिका
ट्यूमर periosteum विकास दुई कारक असर:
ऊतक को घाउ तहहरू अक्सर दाँत निकासी पछि गठन गरिएको छ जो मार्फत मा जीवाणुहरु को प्रवेश;
purulent प्रक्रियाहरू वा आन्तरिक दाँत जरा संक्रमण फैलियो।
स्वस्थ mucosa मार्फत प्रवेश शायद सम्भव छ, तर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर छ भने, जीवाणुहरु तुरुन्तै mucosa मा खुलिरहेको। चिकित्सकीय स्वच्छता को अभाव मुख मा सूक्ष्मजीवहरु को वृद्धि बढवा दिन्छ। जब पहिलो आन्तरिक ऊतक घाउ संक्रमण तत्काल हुन्छ।
आन्तरिक संक्रमण अक्सर शरीर अज्ञात संक्रमण को आक्रमण कमजोर भएको बेला, जवान छोराछोरीलाई देख्न। उमेर संग, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ र हरेक जीवाणु सुरक्षा सीमा हटाउन सक्षम छ। तर, एक व्यक्ति जानाजानी आफ्नो स्वास्थ्य, नतिजा उहाँलाई पर्खिरहेका के थाह छैन बिगार्छ। तपाईं ट्रिगरहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
रक्सी र धूम्रपान संक्रमण विभिन्न प्रकार को प्रवेश सुविधा जो मुख, सुक्खामा प्रमुख, राज्य mucosa उल्लङ्घन;
कुनै दाँत भोजन पछि, सुत्नेसमय मा, बिहान सफाई;
गरिब पोषण र जीवन एक निश्चित तरिका;
आन्तरिक पुरानो रोग;
मुख मा bactericidal बुलबुले देखा गर्दा अन्य संक्रमण, यस्तो herpes सिमप्लेक्स प्रकार समावेश, समय समयमा।
साथै, कमी शरीर टोन जीवाणुहरु को तीव्र वृद्धि बढवा दिन्छ। तल्लो चिबुक को purulent विद्रधि, को अनुहार क्षेत्रको ठूलो भागहरु कब्जा सक्षम गठन।
तीव्र अवस्थाको कारण
प्रवाह को विकास मा मुख्य कारक भेद - दाँत मा प्रजनन जीवाणुहरु को समसामयिक विनाश को कमी छ। मान्छे कंडीशनर आनंद र नियमित दन्त चिकित्सक भ्रमण, को mandible को periostitis कहिल्यै प्राप्त, मुख स्वच्छता। प्रवाह लक्षण सधैं यो हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु को विशाल आक्रमण सामना गर्न भन्दा रोक्न राम्रो छ, अप्रिय परिणाम छ।
परिस्थिति को confluence जीवाणुहरु को एक हिमस्खलन वृद्धि ट्रिगर सकेन। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया Tissues को एक महान सुनिंनु सिर्जना गर्ने, सुनिंनु को साइटमा तरल पदार्थ को प्रवाह बढाउँछ। यस्तो जटिलताहरू निम्न कारणहरू प्रभाव अन्तर्गत सम्भव छ:
दाँत को कार्य गरेर आसपास ऊतक को सुनिंनु periodontitis सुरु हुन्छ।
Provocateur क्षयरोगका कार्य गर्न सक्छ।
संक्रामक कारण शरीर गरेको प्रतिरक्षाको कम मजबूत अन्तर्गत हुन्छ।
को चिबुक को चोट, को चिबुक हड्डी को विस्थापन पछि।
को मसूडों को एलर्जी सुनिंनु।
को अवस्थित प्रकार
को प्रवाह सुनिंनु को प्रकार, ट्यूमर को आकार, गठन को समय विभाजित। यो जानकारी सही उपचार चयन गर्न आवश्यक छ। यहाँ रोग सम्भावित राज्य हो:
Periostitis mandible पीप गठन गर्ने पारित गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रकारका अनुहार को उपस्थिति विकृत धेरै ठूलो ट्यूमर छन्। तीव्र प्रकारका अचाक्ली को अवस्थामा जीवाणु सुनिंनु को विकास को प्रारम्भिक चरणमा मा immunocompromised मा आउँदैन।
रोग को पुरानो फारम लक्षण बिना लामो समय को लागि विकास। तर अनुकूल अवस्थामा, त्यहाँ एउटा सक्रिय जीवाणु वृद्धि छ। , को मसूडों बढ्छ को सुनिंनु वरपरको Tissues गर्न फैलाउने। periodontitis यस प्रकारको पीप संग ठाउँ त लिन, र यो बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
सरल रोकनेवाला विकास प्रकारको आवंटित: वहाँ सुनिंनु को लक्षण को गठन बिना ऊतक को क्षय छ। रगतको यस प्रकार सुनिंनु देखिन सक्छ मा, दुखाइ महसुस गरिएको छ।
यो पुरानो फारम अक्सर भनिन्छ ossificans periostitis। यो विकल्प अन्तर्गत त्यहाँ jawbone मा ट्यूमर को विकास छ। पहिचान संरचनात्मक परिवर्तन एक्स-रे परीक्षा द्वारा बाहिर गर्न सकिन्छ। चित्रमा देखिने spikes thickening हुनेछ।
तीव्र सुनिंनु को एक विशेष प्रकार mandible एक serous periostitis छ। यो रोग periodontitis को प्रभाव अन्तर्गत गठन गरिएको छ। लक्षण ज्वरो, खाना को चबाने समयमा दुखाइ, र ऊतक को सुनिंनु छन्। रोगग्रस्त मसूडों मा दाँत अक्सर हटाइयो।
परिमार्जित गम fibrous ऊतक को फारम लिन सक्छ। सुनिंनु को प्रक्रिया दांत नै र चिबुक को हड्डी रूपमा समावेश छ। यी परिवर्तनहरू periosteum एक भागमा बारम्बार यांत्रिक प्रभाव को एक परिणाम रूपमा आउँदैन।
palpation मा अक्सर mandible मात्र तीव्र periostitis पत्ता सकिन्छ। निम्न अमेरिका द्वारा वर्णन पुरानो सुनिंनु को लक्षण:
रोग को लुकेका प्रकृति मा सामान्य स्वास्थ्य को गिरावट। तापमान 37 डिग्री माथिको rises अक्सर, यो ठाउँ लिन्छ।
जवान छोराछोरीको, त्यहाँ रोइरहेको, बेचैन निद्रामा वृद्धि भएको छ। अक्सर, तिनीहरूले पनि खान, तपाईं चपाउनु चाहनुहुन्छ इन्कार गर्छन्।
Palpation thickening gingival Tissues छोयो जब soreness प्रतिक्रिया जो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। साथै, गाला को एक मामूली सुनिंनु छ।
लक्षण प्रतिरक्षा को कमी को समयमा खराब छन्। चिसो वा तीव्र-श्वसन जटिलताहरू तुरुन्तै मसूडों दुखाइ प्रतिक्रिया।
तीव्र periostitis mandible सधैं सम्पूर्ण जीव लागि जोखिम छ। यो बिन्दु मा गाला वा घाँटी क्षेत्र को एक तीव्र सुनिंनु छ। Tumescent ऊतक को मसूडों देखिएको। दुखाइ सीमा उच्च सहिष्णुता बन्नेछ।
को मसूडों देखि Purulent छुट्टी रोगी को एक अत्यन्तै कठिन स्थिति संकेत गर्छ। मात्र सर्जरी द्वारा उपचार छ यस प्रकारको प्लास्टिक सर्जन आवश्यक हुन सक्छ। को विद्रधि retromolar जबडे विकास भएको छ जब यस्तो अवस्था हुन्छ। कठिन molars मच्चिरहेको गर्दा समस्या उत्पन्न।
रोग सबै तीव्र चरण बढेको लसीका नोड्स सँगसँगै छन्।
तीव्र सुनिंनु को विशिष्ठ सुविधाहरू
को mandible कुनै पनि तीव्र purulent periostitis देखिने लक्षण संग हुन्छ। उहाँले एक inflamed periodontal रोग बाट जटिलताहरू को परिणाम बन्नेछ। यो राज्य द्वारा निम्न लक्षण विशेषता: को गाल र गिजा को गंभीर सुनिंनु, चबाने समयमा दुखाइ। राम्रो-हुनुमा चिन्ह लगाइयो गिरावट। अनुहार आकार अक्सर परिमार्जन, तर छाला को रंग नै रहनेछ।
सधैं सुनिंनु को एक लक्षण periodontitis को घटना को क्षेत्र मा लसीका नोड्स thickened हुन्छ। चालु चरण प्रभावित दाँत को जरा लागि बेबदल अवस्था वर्णन गरे। यो उपचार समयमा हटाउन छ। तर अक्सर, प्रभावित क्षेत्र जीवाणुरोधी समाधान संग उपचार गरिएको छ।
Multiroot दाँत दन्त उपचार गर्न उत्तरदायी छैनन्। यदि तिनीहरूले हटाइएको छैन, त्यसपछि lymphadenitis सुनिंनु थप विकास संग उत्पन्न हुन सक्छ। को जीवाणु वातावरण को लसीका प्रणाली को ducts मार्फत यसलाई स्वास्थ्य को गिरावट गर्न प्रमुख, शरीर भर फैलाने हुनेछ।
पुरानो सुनिंनु को विशिष्ठ सुविधाहरू
दन्त क्षय को समस्या अक्सर समयमा, स्रोतको कमी या बस नजिकैको क्लिनिक को अभाव गर्न unnoticed बाँकी छन्। आफ्नो शरीर को बेवास्ता जीवाणु सुनिंनु जान्छ। को mandible को पुरानो periostitis यो पत्ता सकिन्छ मात्र दन्त कार्यालय मा, लक्षण विकसित।
फारम relapsing भएको छ कि हालत पहिले विद्रधि संग विद्रधि गर्दा हुन्छ। उपचार वा जीवाणु वातावरण को यो छ पुन: विकास कमी को परिणाम स्वरूप। यसरी, तल्लो चिबुक periostitis निकासी पछि, गुहा राम्ररी सफा छैन भने गठन गरिएको छ।
को periosteum एक सुनिंनु विकास प्रक्रिया
रोग विकास को प्रारम्भिक चरणमा मानिसहरूलाई imperceptible छन्। सुनिंनु को ढिलो विकास जीवाणुहरु को gingival Tissues मा एक foothold पाउन अनुमति दिन्छ। periodontitis को पहिलो लक्षण मुख मा बेचैनी मा पाउन सकिन्छ। भाषा दाँत अन्तर्गत अलिकति induration याद।
विकास को अर्को चरण चबाने समयमा दुखाइ सँगसँगै छ। त्यसपछि राता दाँत को जरा गठन। Inflamed गिजा, वृद्धि edema तिर जान्छ। अनुहार को सन्तुलन यो नाङ्गो आँखा संग देख्न सकिन्छ, भङ्ग गरिएको छ।
edema थप विकास संग, ऊतक आसपास inflamed। को गाल देखिने राता। लामो समय को लागि अनुपचारित बायाँ भने, अल्सर गठन। केही समय पछि तिनीहरूले खोलिएका छन्। को जीवाणु वातावरण संग मिश्रित आक्रान्त, यो आन्तरिक अंग प्रणाली को एक जोखिम poses।
सुनिंनु को foci सम्पूर्ण शरीर मार्फत बित्दै जो संक्रमण लसीका को एक कारण, बन्न सक्छ। अनुपचारित periodontitis चरण एक दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्नुपर्छ दुखाइ को पहिलो साइन मा, दाँत को विशाल हानि गर्न सक्छ त्यसैले।
प्रकार पाठ्यक्रम उपचार
Periodontal रोग लगभग सधैं एक निदान गर्न जान्छ: तल्लो चिबुक को विद्रधि। उपचार एक दन्त चिकित्सक को कार्यालय मा तुरुन्त बाहिर छ। स्थानीय एनेस्थेसिया प्रयोग गरिन्छ चिकित्सा को कुनै पनि प्रकारको पूरा गर्न। Purulent periostitis घाउ दाँत र अवशिष्ट गुहा राम्ररी समाधान संग धोए छ mnogokorennyh हट्न। अनुचित उपचार periosteum पटक-पटक सुनिंनु जान्छ।
जब periostitis periosteum एकल-गाडेको दाँत अक्सर हटाउने बिना सुन्निएको ऊतक खोलिएका छन् र सफाई समाधान को च्यानल। समयमै उपचार काम कुकुर राख्न मदत गर्न सक्छ। ऊतक मरम्मत को अवधिमा भडकाऊ र जीवाणुरोधी लागूपदार्थ नियुक्त।
जब गंभीर दुखाइ anesthetics स्थानीय compresses प्रयोग गर्न अनुज्ञेय छ। को जीवाणु वातावरण विनाश लागि व्यापक चिकित्सकीय विधिहरू लागू हुन्छ। यी अति-बैंगनी समावेश विकिरण, लेजर र प्रकाश उपचार।
दन्त चिकित्सक मा आवधिक निरीक्षण मात्र होइन भडकाऊ अवस्था तिरस्कार, तर पनि स्वस्थ दाँत बचाउँछ। उपचार अलि समय लाग्छ, तर एक सुन्दर मुस्कान एक पाकेको बुढ्यौली सम्म बचत गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता, आहार कायम गर्न, साथै पुरानो रोग को विकास निगरानी शरीर आवश्यकता कायम गर्न।
जीवाणुहरु, शरीर भिटामिन मुख rinsing लागि तरल प्रयोग गर्न कायम गर्न आवश्यक काउन्टरको गर्न। मुख विशेष antiseptics मा घाउ को संक्रामक रोगहरु उपचार गर्दा। कर्मेल, चकलेट र अन्य मिठाई उत्पादन: दाँत मा adversely मिठाई असर गर्छ।
जोखिम समूह खतरनाक खेल संलग्न मान्छे पनि समावेश छ। कारण आवधिक चिबुक आघात गर्न, शरीर प्रवाह विकास गर्न एक predisposition प्राप्त। चालु एक भडकाऊ को चरण स्ट्रोक लागि संचित पीप को गठन गर्न प्रमुख प्रक्रिया। स्थिति विद्रधि लामो र पीडादायी यथावत्। यो अप्रिय जटिलताहरू सामना गर्न भन्दा रोक्न राम्रो छ।
Irrigator Aquajet एलडी A8: विवरण र समीक्षा
पहिले र पछि दाँत को बहाली। Narrative दन्त पुनर्स्थापना
किन अस्थायी भर्ने?
यो एक चिसो संग दाँत उपचार गर्न सम्भव र केही अवस्थामा छ,
भान्नि: समीक्षाहरू, प्रयोगका लागि सिफारिशहरू
Orthodontics मा दाँत को पङ्क्तिबद्ध
एक केटी लागि नाम कसरी चयन गर्न: इतिहास र modernity को एक सानो बिट
बच्चाहरु को लागि केक पुटीन (फोटो)
इन्फ्रारेड convector: विवरण र विशेषताहरु
"क्याल्विन क्लेन" - नामको साथ इत्र
AT Twardowski, "Vasily Terkin": एक कविता विश्लेषण
इटालियन सुप: पढें। सानो पास्ता संग इटालियन सूप
घरमा गोलाकार कसरी लागू गर्ने?
रात क्रीम: सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादन, चयन, आवेदन, समीक्षा को एक समीक्षा
आगो सुरक्षा ऐन। आगो सुरक्षा प्रणाली। आगो सुरक्षा - यो छ ...